ယူနိုကျတကျကို နိုငျပွီးရငျ အခွအေနမေကောငျးဖွဈသှားတဲ့အသငျးတှထေဲမှာ မနျစီးတီးလညျးပါဝငျမှာလား? |
ပွီးခဲ့တဲ့စနနေကေ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၁၁)အဖွဈကစားခဲ့တဲ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲမှာ မနျစီးတီးအသငျးက မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးကို (၂-၀)ဂိုးနဲ့အနိုငျယူပွီး ထိပျဆုံးကခယျြလျဆီးနဲ့(၃)မှတျအကှာ အဆငျ့(၂)နရောကိုရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ စိတျပကျြစရာကောငျးတဲ့ရလဒျတှနေဲ့ရငျဆိုငျနရေသလို ပရီးမီးယားလိဂျအိမျကှငျးနောကျဆုံး(၄)ပှဲမှာလညျး
ဗီလာ၊ လီဗာပူးလျ၊ မနျစီးတီးတို့ကို ဆကျတိုကျရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး အဲဗာတနျနဲ့(၁-၁)ဂိုးစီသရကေခြဲ့ပါတယျ။
ဆိုးလျရှားရဲ့နညျးစနဈပိုငျးအားနညျးမှု၊ ကစားသမားတှရေဲ့နိုငျလိုစိတျပြောကျဆုံးနမှေုတှကွေောငျ့ ယူနိုကျတကျအသငျး အခုလိုရှုံးပှဲတှနေဲ့ရငျဆိုငျနရေတာက သိပျမဆနျးပမေယျ့
အံ့အားသ့ငျစရာကောငျးတာက ဒီရာသီမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးကို အနိုငျယူခဲ့တဲ့အသငျးတှဟော နောကျပိုငျးပှဲတှမှော ရုနျးကနျနရေတာပါပဲ။
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဒီရာသီပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂျရှုံးပှဲအဖွဈ ဗီလာကို အိမျကှငျးမှာ(၁-၀)ဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့ပွီး
အဲဒီပှဲနောကျပိုငျး ဗီလာအသငျး မထငျမှတျလောကျအောငျကို ရလဒျတှဆေိုးရှားခဲ့သလို ပရီးမီးယားလိဂျ(၅)ပှဲဆကျတိုကျအရေးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ နညျးပွဒငျးစမဈပါ ရာထူးကအထုတျခံရတဲ့အထိဖွဈသှားပါတယျ။
အဲဒီနောကျ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ လကျစတာကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့အရှကျတကှဲရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး လကျစတာအသငျးဟာ ယူနိုကျတကျနဲ့ပှဲအပွီး
ပရီးမီးယားလိဂျ(၃)ပှဲမှာ (၁)ပှဲသာအနိုငျရခဲ့တဲ့အပွငျ (၁)ပှဲရှုံး၊ (၁)ပှဲသရကေခြဲ့တာကွောငျ့ အခုလောလောဆယျ အမှတျပေးဇယားအဆငျ့(၁၂)အထိကဆြငျးသှားခဲ့ပါတယျ။
ဗီလာ၊ လကျစတာအသငျးတို့လို ယူနိုကျတကျကို အနိုငျယူပွီးတဲ့နောကျ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးအောငျ ရလဒျတှယေိမျးယိုငျသှားတာကတော့ လီဗာပူးလျအသငျးပါပဲ။
လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးကို အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ(၅-၀)ဂိုးပွတျနဲ့အနိုငျရခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ အကွီးကယျြဆုံးနိုငျပှဲရယူခဲ့ပမေယျ့ အဲဒီနောကျပိုငျး ရလဒျတှကေဆြငျးသှားခဲ့တာပါ။
ယူနိုကျတကျပှဲအပွီး ဘရိုကျတနျနဲ့ကစားခဲ့တဲ့အိမျကှငျးပှဲမှာ လီဗာပူးလျအသငျး (၂-၀)ဂိုးပွတျဦးဆောငျပွီးတော့မှ ခပြေဂိုးတှပွေနျပေးလိုကျရတဲ့အတှကျ သရနေဲ့သာကနြေပျခဲ့ရတဲ့အပွငျ
ပိုဆိုးတာက ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျမှာ ဝကျဈဟမျးအသငျးကို(၃-၂)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂျပထမဆုံးရှုံးပှဲကွုံတှခေဲ့ပွီး အဆငျ့(၄)နရောရောကျသှားပါတော့တယျ။
ဆိုးလျရှားဟာ ဘာအရညျအခငျြးမှမရှိပမေယျ့ ဘုနျးကံကွီးမားတဲ့လူတဈယောကျမြားဖွဈနလေားဆိုတာ သံသယဖွဈစရာပါပဲ။
အခု ယူနိုကျတကျအသငျးကို အနိုငျယူခဲ့တဲ့ မနျစီးတီးအသငျးရော ဗီလာ၊ လကျစတာ၊ လီဗာပူးလျတို့လို မထငျမှတျဘဲ ရလဒျတှယေိမျးယိုငျသှားမလား…
ခွစှေမျးကောငျးတှဆေကျလကျပွသနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲဖွဈပါတော့တယျ …
ယူနိုက်တက်ကို နိုင်ပြီးရင် အခြေအနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အသင်းတွေထဲမှာ မန်စီးတီးလည်းပါဝင်မှာလား?
ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၁၁)အဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမှာ မန်စီးတီးအသင်းက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကို (၂-၀)ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး ထိပ်ဆုံးကချယ်လ်ဆီးနဲ့(၃)မှတ်အကွာ အဆင့်(၂)နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလို ပရီးမီးယားလိဂ်အိမ်ကွင်းနောက်ဆုံး(၄)ပွဲမှာလည်း ဗီလာ၊ လီဗာပူးလ်၊ မန်စီးတီးတို့ကို ဆက်တိုက်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အဲဗာတန်နဲ့(၁-၁)ဂိုးစီသရေကျခဲ့ပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားရဲ့နည်းစနစ်ပိုင်းအားနည်းမှု၊ ကစားသမားတွေရဲ့နိုင်လိုစိတ်ပျောက်ဆုံးနေမှုတွေကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်း အခုလိုရှုံးပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာက သိပ်မဆန်းပေမယ့် အံ့အားသ့င်စရာကောင်းတာက ဒီရာသီမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့အသင်းတွေဟာ နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ ရုန်းကန်နေရတာပါပဲ။
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဒီရာသီပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ရှုံးပွဲအဖြစ် ဗီလာကို အိမ်ကွင်းမှာ(၁-၀)ဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့ပြီး အဲဒီပွဲနောက်ပိုင်း ဗီလာအသင်း မထင်မှတ်လောက်အောင်ကို ရလဒ်တွေဆိုးရွားခဲ့သလို ပရီးမီးယားလိဂ်(၅)ပွဲဆက်တိုက်အရေးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် နည်းပြဒင်းစမစ်ပါ ရာထူးကအထုတ်ခံရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲဒီနောက် ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ လက်စတာကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့အရှက်တကွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး လက်စတာအသင်းဟာ ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲအပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်(၃)ပွဲမှာ (၁)ပွဲသာအနိုင်ရခဲ့တဲ့အပြင် (၁)ပွဲရှုံး၊ (၁)ပွဲသရေကျခဲ့တာကြောင့် အခုလောလောဆယ် အမှတ်ပေးဇယားအဆင့်(၁၂)အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဗီလာ၊ လက်စတာအသင်းတို့လို ယူနိုက်တက်ကို အနိုင်ယူပြီးတဲ့နောက် အံ့အားသင့်စရာကောင်းအောင် ရလဒ်တွေယိမ်းယိုင်သွားတာကတော့ လီဗာပူးလ်အသင်းပါပဲ။
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ(၅-၀)ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးကျယ်ဆုံးနိုင်ပွဲရယူခဲ့ပေမယ့် အဲဒီနောက်ပိုင်း ရလဒ်တွေကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။
ယူနိုက်တက်ပွဲအပြီး ဘရိုက်တန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့အိမ်ကွင်းပွဲမှာ လီဗာပူးလ်အသင်း (၂-၀)ဂိုးပြတ်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ ချေပဂိုးတွေပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် သရေနဲ့သာကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့အပြင် ပိုဆိုးတာက ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကို(၃-၂)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂ်ပထမဆုံးရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး အဆင့်(၄)နေရာရောက်သွားပါတော့တယ်။
ဆိုးလ်ရှားဟာ ဘာအရည်အချင်းမှမရှိပေမယ့် ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့လူတစ်ယောက်များဖြစ်နေလားဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာပါပဲ။ အခု ယူနိုက်တက်အသင်းကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းရော ဗီလာ၊ လက်စတာ၊ လီဗာပူးလ်တို့လို မထင်မှတ်ဘဲ ရလဒ်တွေယိမ်းယိုင်သွားမလား.. ခြေစွမ်းကောင်းတွေဆက်လက်ပြသနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ် ..
အာဆငျနယျအသငျးအတှကျခွစှေမျးပွနတေဲ့ စမဈရိုး နိုငျငံအသငျးမှာပထမဆုံးအကွိမျရှေးခယျြခံရ